Filipina: Firohotana Mihàza Katsatsaka Tokay · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Aogositra 2011 4:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, srpski, বাংলা, Svenska, Español, русский, Italiano, English
Volana vitsy lasa izay, ny fihazàna ny Katsatsaka Tokay na Tuko amin'ny fiteny Filipiana dia lasa irohotana tokoa ao Filipina, noho ny tatitra mandeha fa hoe vola be no ividianan'ireo mpivarotra amin'ny alalan'ny aterineto ireo katsatsaka. Nanomboka ny fihazana rehefa niely ny tsaho fa afaka manampy amin'ny fitsaboana ny aretin'ny fahasemporana sy ny VIH/SIDA ny katsatsaka [Ang].
Ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamana dia efa namoaka fanambarana izay mampahatsiahy ny vahoaka fa tsy marim-pototra ilay tsaho momba ny lanja ara-pahasalamanan'ny katsatsaka:
Ny fomba fanao nentin-drazana amin'ny fampiasana ireo katsatsaka ho fitsaboana ny SIDA sy ny aretin'ny fahasemporana dia mitohy mandrak'ankehitriny ary tena mahavelom-panahiana ny Sampan-draharahan'ny Fahasalamanana na ny DOH (Departement Of Health). Tsy marim-pototra ny filazàna fa ity fomba fanao ity dia manasitrana ny aretina toy ny SIDA na mitondra ny fihenàn'ny fanaintainana amin'ny fisehon'ny aretin'ny fahasemporana. Noho izany, tsy ankatoavinay ho fitsaboana, na aretina inona, na aretina inona izy ity.
Natahotra ny Senatera Manny Villar fa ity firohotana mihàza katsatsaka ity dia mety hitarika amin'ny fahalaniana tamingan’ ilay karazam-biby ao amin'ny firenena:
Na dia tsy voasokajy ho tena tandindomin-doza aza ny katsatsaka, tandindomin-doza na marefo, dia efa eo an-dàlam-paharitana tanteraka na ho lany tamingana noho ny fanaovana ny antsoina hoe ‘collection’..
Avy amin'ny pejy Flickr ao amin'ny gaikokujinkun, ambany fiarovan'ny CC License Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
Cebu sy Davao Journey dia manana namana izay tena nafàna fo tokoa nikatsaka katsatsaka:
Tao aminà onjam-peo tao Davao no nahenoako voalohany ny momba ity firohotana ho amin'ny katsatsaka ity volana vitsy lasa izay, rehefa naheno ilay mpanao filazàna niresaka momba ilay fitaka bevava ny amin'ny fivarotana katsatsaka amin'ny vidiny 100,000 ka hatramin'ny 200,000 Pesos. Tsy dia nino loatra izay nolazain'ilay mpanao filazàna aho. Taty amin'ny farany vao fantatro fa tena marina ilay izy. Namana sasantsasany no nilaza ny momba izany tamiko, fa nandany fotoana tamin'ny fitadiavana katsatsaka izy ireo ka nanantena ny ho mpanapitrisa ao anatin'ny indray mipi-maso monja.
Walking Newspaper, biolojista iray (Avy amin'ny mpamoaka lahatsoratra: mpandalina momba ny aina amin'ny endriny rehetra) , dia nandà ny fihazàna katsatsaka mba hahazoam-bola:
Ka izao, raha faran'izay tsotra sy haingana ny fisamborana na dia iray fotsiny ihany aza noho ny fisorataa anarana sy fanampiana ary fandraisana vodiondrim-barotra amin'ny aterineto, dia aleoko ajanona ny fandehanana an-tsekoly ka handeha tsotra fotsiny any anaty ala ary hisambotra katsatsaka mandritra ny fiainako manontolo. Amin'alahelo no hitenenako fa, namantsika ny katsatsaka, amiko – amin'ny maha biolojista ahy, fa tsy natao ho fitadiavana làlam-barotra akory..
Manamora ny fivarotana katsatsaka ny Aterineto izay efa nambara fa hosoka. Nanamarika Tjsdaily fa maro ireo Filipana no tsy mbola mahalala akory hoe mpisandoka ireo mpividy katsatsaka amin'ny aterineto:
Antony an-davitrisany maro no nahatonga ity varotra katsatsaka ity ho hosoka tahaka izany- hosoka fotsiny tsotra izao. Indrisy anefa, fa ny ankamaroan'ireo vahoaka Filipiana dia tena mbola tsy mahalala mihitsy hoe toy ny ahoana ny fomba fiasan'ny mpanao hosoka.
Nampiseho ny pejy iray manontolon'ilay tranonkala ihany koa ny mpitoraka bilaogy izay ahitàna ny fandefasana tolo-bidy tena tsy nampino ho an'ny katsatsaka velona:
Mendrika ny ho iray tapitrisa pesos ny Katsatsaka Tokay
Our Philippine Trees dia manantena fa tsy hahita katsatsaka any amin'ny toerana fiafenany ireo ‘mpitrandraka’ :
Azo eritreretina fa ny lazan'ny katsatsaka dia hahasarika Pinoys vitsivitsy mpanao fandraharahàna hamandrika ireo santionany any amin'ny faritany.
Manatena aho fa hijanona any amin'izay toerana misy azy ny katsatsaka ka hampitondra faisana ireo mpitrandraka. Enga anie ka hiraketan'ny katsatsaka izy ireo mandra-piendaky ny hodiny izay matevina tsara!
Just my Personal Opinions dia tsy afaka ny hahita olona tena mahavita mivarotra katsatsaka iray amin'ny vidiny lafo:
Marina ve izany? Manana namana betsaka aho izay mpihaza” katsatsaka”. Kanefa tsy nisy na dia iray aza afaka nanome porofo vitsivitsy ho ahy akory fa tena misy “mpanapitrisa” tokoa ny mpividy….na farafaharatsiny, namana iray izay afaka nivarotra tamin'izany vidiny izany.
Iray tapirisa pesos ho vidinà ” katsatsaka” lehibe iray, tsy vitako ny tsy hisaina hoe tafiditra anaty sehatra goavana kokoa noho ny fitsaboana ny sida sy ny homamiadana izy ireo …raha toa ka marina izany. Na raha tsia, dia mety hisy ve olona iray monja nanao ity “fanairana tsy mitombina” ity mba hanodinana ny sain'ny be sy ny maro?
My Life in Cebu na Ny fiainako ao Cebu dia nisafidy ny hiala lavitr'ireo mpihaza katsatsaka ireo:
Amiko manokana, tsy hihaza na hividy katsatsaka iray akory aho, eny fa na dia 100 pesos aza ny iray. Mbola mampatahotra ahy ihany ny katsatsaka ary manaja sy mankasitraka ny antom-pisian'izy ireo aho amin'ny maha mpamono moka azy. Tsy misy avelako hihaza fotsiny ireny katsatsaka ireny ny olona ao an-tranonay. Mety afaka mampidi-bola be ho an'ny olona ny katsatsaka kanefa aleoko ihany mijanona amin'ny asako.;)
Tokek Sabah dia nandefa tantara 10 momba ny firohotana amin'ny fihazàna katsatsaka ao Filipina……